The Girl on the Train (2016) | MM Movie Store
‘ ငါ့အမြိုးသားက ငါ့ကိုအမွဲတမျးစိတျကူးယဉျတယျလို့ပွောတတျတယျငါမတတျနိုငျဘူးလေ ငါဆိုလိုခငျြတာက မငျးဟာရထားစီးနရေငျးနဲ့ ရထားလမျးဘေးကလူတှရေဲ့ ဘဝကဘယျလိုလဲဆိုတာ စဉျးစားကွညျ့ဖူးလား???မငျးမနဖေူးတဲ့ဘဝမြိုးတှလေေ အဲ့ဒါတှကေ ငါသိခငျြနတေဲ့အကွောငျးတှပေဲ’Emily Bluntရဲ့ 2016နှဈကုနျနီးကမှထှကျတဲ့ DVDလေးအကွောငျး လကျတို့ပါရစေ။
ဒီ Movieကို ကြှနျတေျာ့ဖေးဗရိတျထဲကြှနျတျောထညျ့လိုကျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကတော့ အကွိုကျခွငျးမတူနိုငျပါဘူး။ ဒီ Movieဟာ ခံစားသူအပျေါမူတညျပွီး အဓိပ်ပာယျအမြိုးမြိုးထှကျနိုငျပါတယျ။မူရငျးစာရေးဆရာရညျညှနျးတာကတော Thrillerပါ။
Paula Hawkinရဲ့ အရောငျးရဆုံးစာအုပျ That Shocked The Worldကို ပွနျရိုကျတာပါ။ DVDကာဗာမှာ Entertainment Weekly က ‘ The Darkest,Sexiest,Most Daring Thriller of the Year.’လို့ညှနျးတာကို ဖျောပွထားပါတယျ။ဒီmovieမှာက ဇာတျကောငျအမြားကွီးမပါပါဘူး။
6ယောကျပဲပါတယျ။ အဲ့ ဇာတျကောငျ 6ယောကျရဲ့ ပတျသတျမှုတှကေို တဈခနျးခွငျးဆီ ပွီးတော့ အခြိနျတှေ လတှနေဲ့ပါ ခှဲပွီးရိုကျပွထားပါတယျ။ ဇာတျရညျမလညျခငျထိ အတျောအားစိုကျကွညျ့ယူရပါတယျ။ အစပိုငျးက အနညျးငယျပငျြးစရာကောငျးပါတယျ။
တဈဝကျလောကျလဲရောကျရော ဘာဆကျဖွဈမလဲ ဘာဆကျဖွဈမလဲဆိုတဲ့ထိ စိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။အဓိကကဇာတျကောငျက ရခေယျြ(Emily Blunt)ပါ။သူဟာအထီးကနျြပွီး အရကျစှဲနတေဲ့ တဈခုလပျပါ။ ယောကြာင်္းဖွဈသူနဲ့လညျး ကှာရှငျးထားပါတယျ။
ယောင်ျကြားနဲ့ကှာရှငျးရတဲ့ အကွောငျးက သူ့မှာကိုယျဝနျမရနိုငျတော့လို့ပါ။ အဲ့မှာပဲ သူမဟာ အရကျတှအေလှနျအကြှံသောကျတတျလာတယျ။အမူးလှနျပွီးရငျ လုပျမိလုပျရာလုပျတတျတယျ။မနကျမိုးလငျးရငျ ဘာမှမမှတျမိတော့ဘူး။သူမဟာ သူနတေဲ့နရောကနေ နယူးယောကျထိ နတေိုငျးရထားစီးပါတယျ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူမဟာ အလုပျမရှိလို့ပါ။ သူမအလုပျပွုတျခဲ့တာကို သူမကပျနရေတဲ့အိမျကသူငယျခငျြးမသိအောငျ နတေိုငျးအပွငျထှကျပွနတောပါ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အလုပျမရှိရငျ အိမျလခမပေးနိုငျတာကို သူငယျခငျြးကိုမသိစခေငျြတာပါ။ အထီးကနျြနတောလညျးပါပါတယျ။
ရထားစီးနရေငျးနဲ့ အရမျးလိုကျဖကျတဲ့ စုံတှဲ ရိုမနျတဈဆနျတဲ့စုံတှဲကို သူမတှလေို့ကျရပါတယျ။ အဲ့ဘဝဟာ ရခေယျြအရမျးလိုခငျြပွီး မရခဲ့တဲ့ဘဝမြိုးပါ။အဲ့ကောငျမလေးကို သူမ မသိပမေယျ့ သူမရဲ့စိတျထဲမှာသိပါလိုကျပွီး အမြိုးပုံဖျောကွညျ့နမေိပါတယျ။
တဈရကျကွတော့ အဲ့ကောငျမလေးဟာ တခွားအမြိုးသားတဈဦးနဲ့ နမျးနတောကို ရခေယျြတှလေို့ကျတယျ။ သူမအရမျးဒေါသတှထှေကျသှားတယျ။ သူ့စံပွဟာ ဒီလိုဖောကျပွနျရသလားဆိုပွ သှားသတျမယျစိတျကူးပါတယျ။ မူးလညျးအရမျးမူးနပေါတယျ။ သတျမယျဆိုပွီး ရထားပျေါကဆငျးတယျ။
သူမ အိပျယာနိုးလာတော့ သူမမှာဒဏျရာတှေ သှေးတှနေဲ့ ဒါပမေယျ့ ဘာမှ မမှတျမိတော့ပါဘူး။ အဲ့ကောငျမလေးကတော့ပြောကျသှားခဲ့တယျ။အဲ့ကောငျမလေးနာမညျက မီဂနျသူမဟာ ဆယျကြျောသကျလေး ပုနျကနျခငျြတဲ့စိတျရှိတဲ့ကောငျမလေး။ ပွီးတော့ စိတျမှာဒဏျရာတှအေမြားကွီးရဖူးတယျ။
ဒါမို့ သူမဟာ စိတျရောဂါဆရာဝနျနဲ့ စိတျရောကုထုံးတှပွေလရှေိ့တယျ။ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျလရှေိ့တယျ။သူ့ကိုယျသူ မိနျးမပကျြလို့ထငျလရှေိ့တယျ။ 17နှဈက အဈကိုရဲ့သူငယျခငျြး Macနဲ့ ကိုယျဝနျဖူးတယျ။ အဲ့ကလေးကို သူမရဲ့နမျောနမဲ့နိုငျမှုကွောငျ့ သတျမိသလိုဖွဈသှားတယျ။ အဲ့မှာပဲ Macက သူမကို စှနျ့ခှာသှားတယျ။
သူမဟာပွောတယျ’ လိမျတယျဆိုတာဟာ ခရီးထှကျနရေသလိုပဲတဲ့’ ။ ပွီးတော့ ‘ သူတို့ကဘယျသူတှဆေိုတာအရေးမပါဘူးတဲ့ သူတို့ငါကို ဘယျလိုခံစားရအောငျလုပျလဲပဲ အရေးပါတာတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို အာသာဖွဖြေောကျရသလိုပဲတဲ့ အခွားဘယျသူမှ မသိဘူးတဲ့ ဒါမို သူမဟာ မြားမြားလိမျပွီး ဟနျဆောငျတတျလာတယျတဲ့ ‘ အဲ့လို အတှေးတှရှေိတဲ့ ဆယျကြျောသကျတဈယောကျပါ။
သူမကိုကုသပေးနတေဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ လိငျဆကျဆံဖို့ကွိုးစားကွညျ့တယျ။ သူမပြောကျသှားတော့ ရဲတှကေ ဆရာဝနျကို သံသယဝငျတယျ။နောကျတဈယောကျက ‘ အနျနာ ‘
အနျနာဟာ ရခေယျြအမြိုးသားဟောငျးရဲ့ နောကျအိမျထောငျ။
သူမဟာ ရခေယျြမရခဲ့တဲ့ ကလေးကိုရခဲ့ပွီး ရခေယျြ့ခငျပှနျးဟောငျးနဲ့ သာယာတဲ့ မိသားစုလေးကို တညျထောငျနိုငျခဲ့တယျ။ရခေယျြအရကျမူးပွီးသူတို့ကလေးကို ချေါသှားဖူးတယျ။တကယျတော့ ရခေယျြဟာ ကလေးမရလို့ ကလေးကိုခြီကွညျ့ခငျြရုံလေးပါ။
အနျတာက အဲ့လို့မထငျဘူး သူမရဲ့ကလေးကို လာသတျတယျပဲထငျတာ။ အဲ့အတှကျ ရခေယျြကို သူမမုနျးတယျ။ ထူးဆနျးတာက ‘ မီဂနျ ‘က အနျနာတို့အိမျက ကလေးထိနျးဖွဈနတေယျ။ ဒါပမေယျ့ ‘ မီဂနျ ‘ဟာ ကလေးထိနျးအလုပျကို မုနျးတယျ။
Scottသူက မီဂနျရဲ့ ယောကြာင်္း သူဟာ ကလေးလိုခငျြပွီး မီဂနျကို သဝနျတိုတတျတယျ။ မီဂနျဟာ သူမကို ကုသပေးနတေဲ့ စိတျရောဂါဆရာဝနျနဲ့ ဖောကျပွနျနတေယျလို့ ထငျနတေယျ။ မီဂနျပြောကျသှားတော့ ရဲတှကေ စကော့ကိုလညျးသံသယဝငျတယျ။
အဲ့မှာ ရခေယျြက စကော့ဆီသှားပွီး မီဂနျနဲ့တခွားအမြိုးသားတဈဦးဖောကျပွနျနတော တှတေ့ယျဆိုပွီးသှားပွောတယျ။အဲ့လိုပွောဖို့အတှကျ ရခေယျြဟာ မီဂနျကို သိတယျလို့ စကော့ကို လိမျပွောလိုကျတယျ။ စကော့က ဒီလူလားဆိုပွီး စိတျရောဂါဆရာဝနျပုံပွလိုကျတော့ ရခေယျြက ဟုတျတယျဆိုပွီးထောကျခံလိုကျတယျ။
Tomတှနျက ရခေယျြရဲ့ခငျပှနျးဟောငျး။တကယျတော့သူဟာ ကွမျးတမျးခကျထနျတဲ့စိတျရှိသူတဈယောကျပါ။ရခေယျြကလေးမရတာကို ရှံရှာလို့ ရခေယျြကို စိတျပိုငျးဆိုငျတာ အနိုငျကငျြ့ခဲ့တယျ။ ရခေယျြအရကျမူးလှနျလို့ သူပါအလုပျပွုတျရတယျလို့ ရခေယျြထငျယာငျထငျမှားဖွဈအောငျ ဆိုကျကိုသှငျးပေးလိုကျတယျ။
ဒါပမေယျ့ အလုပျမှာတျောသူဖွဈတဲ့အတှကျ တခွားအလုပျပွနျရတယျ။တကယျတော့သူအလုပျပွုတျတာဟာ မစောငျ့စညျးလို့တဲ့။ sub.titelမှာတော့ဘနျးစကားသုံးထားပါတယျ။ ‘ he couldn’t keep his dick in his pants.’ တဲ့။
အဲ့လို တဈကှကျခွငျးဆီပွပွီးတဲ့နောကျမှာ ‘မီဂနျ’ ရဲ့အလောငျးကို တှပွေီ့လို့ရဲတှကေ ကွျောငွာလိုကျတယျ။အသတျခံရတာဖွဈပွီး မီဂနျမှာ ကိုယျဝနျရှိနတေယျတဲ့။ DNA စဈကွညျ့တော့ ကလေးဟာ ‘စကော့’ ရဲ့ရငျသှေးမဟုတျဘူးတဲ့။ဒါဆို မီဂနျကို သတျတာ ဘယျသူလဲ???
ဖောကျပွနျတယျလို့သံသယရှိတဲ့ စိတျရောဂါဆရာဝနျလား???သဝနျတိုတတျတဲ့ စကော့လား???အမူးလှနျနတေဲ့ ရခေယျြလား????နောကျဆုံးဇာတျသိမျးကတော့ ကြှနျတေျာ့ကိုကနြေပျသှားစပေါတယျ။စာရေးဆရာရဲ့ဇာတျအိမျနိုငျနငျးမှုကတော့ ရလေညျမိုကျတာဗြ။ထငျမထားတဲ့ အလညျ့အပွောငျးလေးတှနေဲ့။
‘ ငါ့အမျိုးသားက ငါ့ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ကူးယဉ်တယ်လို့ပြောတတ်တယ်ငါမတတ်နိုင်ဘူးလေ ငါဆိုလိုချင်တာက မင်းဟာရထားစီးနေရင်းနဲ့ ရထားလမ်းဘေးကလူတွေရဲ့ ဘဝကဘယ်လိုလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ဖူးလား???မင်းမနေဖူးတဲ့ဘဝမျိုးတွေလေ အဲ့ဒါတွေက ငါသိချင်နေတဲ့အကြောင်းတွေပဲ’Emily Bluntရဲ့ 2016နှစ်ကုန်နီးကမှထွက်တဲ့ DVDလေးအကြောင်း လက်တို့ပါရစေ။
ဒီ Movieကို ကျွန်တော့်ဖေးဗရိတ်ထဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ အကြိုက်ခြင်းမတူနိုင်ပါဘူး။ ဒီ Movieဟာ ခံစားသူအပေါ်မူတည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးထွက်နိုင်ပါတယ်။မူရင်းစာရေးဆရာရည်ညွှန်းတာကတော Thrillerပါ။
Paula Hawkinရဲ့ အရောင်းရဆုံးစာအုပ် That Shocked The Worldကို ပြန်ရိုက်တာပါ။ DVDကာဗာမှာ Entertainment Weekly က ‘ The Darkest,Sexiest,Most Daring Thriller of the Year.’လို့ညွှန်းတာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီmovieမှာက ဇာတ်ကောင်အများကြီးမပါပါဘူး။
6ယောက်ပဲပါတယ်။ အဲ့ ဇာတ်ကောင် 6ယောက်ရဲ့ ပတ်သတ်မှုတွေကို တစ်ခန်းခြင်းဆီ ပြီးတော့ အချိန်တွေ လတွေနဲ့ပါ ခွဲပြီးရိုက်ပြထားပါတယ်။ ဇာတ်ရည်မလည်ခင်ထိ အတော်အားစိုက်ကြည့်ယူရပါတယ်။ အစပိုင်းက အနည်းငယ်ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။
တစ်ဝက်လောက်လဲရောက်ရော ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ထိ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။အဓိကကဇာတ်ကောင်က ရေချယ်(Emily Blunt)ပါ။သူဟာအထီးကျန်ပြီး အရက်စွဲနေတဲ့ တစ်ခုလပ်ပါ။ ယောကျာင်္းဖြစ်သူနဲ့လည်း ကွာရှင်းထားပါတယ်။
ယောင်္ကျားနဲ့ကွာရှင်းရတဲ့ အကြောင်းက သူ့မှာကိုယ်ဝန်မရနိုင်တော့လို့ပါ။ အဲ့မှာပဲ သူမဟာ အရက်တွေအလွန်အကျွံသောက်တတ်လာတယ်။အမူးလွန်ပြီးရင် လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်တတ်တယ်။မနက်မိုးလင်းရင် ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး။သူမဟာ သူနေတဲ့နေရာကနေ နယူးယောက်ထိ နေတိုင်းရထားစီးပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမဟာ အလုပ်မရှိလို့ပါ။ သူမအလုပ်ပြုတ်ခဲ့တာကို သူမကပ်နေရတဲ့အိမ်ကသူငယ်ချင်းမသိအောင် နေတိုင်းအပြင်ထွက်ပြနေတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလုပ်မရှိရင် အိမ်လခမပေးနိုင်တာကို သူငယ်ချင်းကိုမသိစေချင်တာပါ။ အထီးကျန်နေတာလည်းပါပါတယ်။
ရထားစီးနေရင်းနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့စုံတွဲကို သူမတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဘဝဟာ ရေချယ်အရမ်းလိုချင်ပြီး မရခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးပါ။အဲ့ကောင်မလေးကို သူမ မသိပေမယ့် သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာသိပါလိုက်ပြီး အမျိုးပုံဖော်ကြည့်နေမိပါတယ်။
တစ်ရက်ကြတော့ အဲ့ကောင်မလေးဟာ တခြားအမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ နမ်းနေတာကို ရေချယ်တွေ့လိုက်တယ်။ သူမအရမ်းဒေါသတွေထွက်သွားတယ်။ သူ့စံပြဟာ ဒီလိုဖောက်ပြန်ရသလားဆိုပြ သွားသတ်မယ်စိတ်ကူးပါတယ်။ မူးလည်းအရမ်းမူးနေပါတယ်။ သတ်မယ်ဆိုပြီး ရထားပေါ်ကဆင်းတယ်။
သူမ အိပ်ယာနိုးလာတော့ သူမမှာဒဏ်ရာတွေ သွေးတွေနဲ့ ဒါပေမယ့် ဘာမှ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ အဲ့ကောင်မလေးကတော့ပျောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ကောင်မလေးနာမည်က မီဂန်သူမဟာ ဆယ်ကျော်သက်လေး ပုန်ကန်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ကောင်မလေး။ ပြီးတော့ စိတ်မှာဒဏ်ရာတွေအများကြီးရဖူးတယ်။
ဒါမို့ သူမဟာ စိတ်ရောဂါဆရာဝန်နဲ့ စိတ်ရောကုထုံးတွေပြလေ့ရှိတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်လေ့ရှိတယ်။သူ့ကိုယ်သူ မိန်းမပျက်လို့ထင်လေ့ရှိတယ်။ 17နှစ်က အစ်ကိုရဲ့သူငယ်ချင်း Macနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖူးတယ်။ အဲ့ကလေးကို သူမရဲ့နမော်နမဲ့နိုင်မှုကြောင့် သတ်မိသလိုဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့မှာပဲ Macက သူမကို စွန့်ခွာသွားတယ်။
သူမဟာပြောတယ်’ လိမ်တယ်ဆိုတာဟာ ခရီးထွက်နေရသလိုပဲတဲ့’ ။ ပြီးတော့ ‘ သူတို့ကဘယ်သူတွေဆိုတာအရေးမပါဘူးတဲ့ သူတို့ငါကို ဘယ်လိုခံစားရအောင်လုပ်လဲပဲ အရေးပါတာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာသာဖြေဖျောက်ရသလိုပဲတဲ့ အခြားဘယ်သူမှ မသိဘူးတဲ့ ဒါမို သူမဟာ များများလိမ်ပြီး ဟန်ဆောင်တတ်လာတယ်တဲ့ ‘ အဲ့လို အတွေးတွေရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ပါ။
သူမကိုကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်။ သူမပျောက်သွားတော့ ရဲတွေက ဆရာဝန်ကို သံသယဝင်တယ်။နောက်တစ်ယောက်က ‘ အန်နာ ‘
အန်နာဟာ ရေချယ်အမျိုးသားဟောင်းရဲ့ နောက်အိမ်ထောင်။
သူမဟာ ရေချယ်မရခဲ့တဲ့ ကလေးကိုရခဲ့ပြီး ရေချယ့်ခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့ သာယာတဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ရေချယ်အရက်မူးပြီးသူတို့ကလေးကို ခေါ်သွားဖူးတယ်။တကယ်တော့ ရေချယ်ဟာ ကလေးမရလို့ ကလေးကိုချီကြည့်ချင်ရုံလေးပါ။
အန်တာက အဲ့လို့မထင်ဘူး သူမရဲ့ကလေးကို လာသတ်တယ်ပဲထင်တာ။ အဲ့အတွက် ရေချယ်ကို သူမမုန်းတယ်။ ထူးဆန်းတာက ‘ မီဂန် ‘က အန်နာတို့အိမ်က ကလေးထိန်းဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ‘ မီဂန် ‘ဟာ ကလေးထိန်းအလုပ်ကို မုန်းတယ်။
Scottသူက မီဂန်ရဲ့ ယောကျာင်္း သူဟာ ကလေးလိုချင်ပြီး မီဂန်ကို သဝန်တိုတတ်တယ်။ မီဂန်ဟာ သူမကို ကုသပေးနေတဲ့ စိတ်ရောဂါဆရာဝန်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ ထင်နေတယ်။ မီဂန်ပျောက်သွားတော့ ရဲတွေက စကော့ကိုလည်းသံသယဝင်တယ်။
အဲ့မှာ ရေချယ်က စကော့ဆီသွားပြီး မီဂန်နဲ့တခြားအမျိုးသားတစ်ဦးဖောက်ပြန်နေတာ တွေ့တယ်ဆိုပြီးသွားပြောတယ်။အဲ့လိုပြောဖို့အတွက် ရေချယ်ဟာ မီဂန်ကို သိတယ်လို့ စကော့ကို လိမ်ပြောလိုက်တယ်။ စကော့က ဒီလူလားဆိုပြီး စိတ်ရောဂါဆရာဝန်ပုံပြလိုက်တော့ ရေချယ်က ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးထောက်ခံလိုက်တယ်။
Tomတွန်က ရေချယ်ရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်း။တကယ်တော့သူဟာ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့စိတ်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ရေချယ်ကလေးမရတာကို ရွံရှာလို့ ရေချယ်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်တာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်။ ရေချယ်အရက်မူးလွန်လို့ သူပါအလုပ်ပြုတ်ရတယ်လို့ ရေချယ်ထင်ယာင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ဆိုက်ကိုသွင်းပေးလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် အလုပ်မှာတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားအလုပ်ပြန်ရတယ်။တကယ်တော့သူအလုပ်ပြုတ်တာဟာ မစောင့်စည်းလို့တဲ့။ sub.titelမှာတော့ဘန်းစကားသုံးထားပါတယ်။ ‘ he couldn’t keep his dick in his pants.’ တဲ့။
အဲ့လို တစ်ကွက်ခြင်းဆီပြပြီးတဲ့နောက်မှာ ‘မီဂန်’ ရဲ့အလောင်းကို တွေ့ပြီလို့ရဲတွေက ကြော်ငြာလိုက်တယ်။အသတ်ခံရတာဖြစ်ပြီး မီဂန်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်တဲ့။ DNA စစ်ကြည့်တော့ ကလေးဟာ ‘စကော့’ ရဲ့ရင်သွေးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဆို မီဂန်ကို သတ်တာ ဘယ်သူလဲ???
ဖောက်ပြန်တယ်လို့သံသယရှိတဲ့ စိတ်ရောဂါဆရာဝန်လား???သဝန်တိုတတ်တဲ့ စကော့လား???အမူးလွန်နေတဲ့ ရေချယ်လား????နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းကတော့ ကျွန်တော့်ကိုကျေနပ်သွားစေပါတယ်။စာရေးဆရာရဲ့ဇာတ်အိမ်နိုင်နင်းမှုကတော့ ရေလည်မိုက်တာဗျ။ထင်မထားတဲ့ အလည့်အပြောင်းလေးတွေနဲ့။